bhimphoto: July 2014
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 1:32 PM No comments:
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 12:15 PM No comments:
एशियन थाइ फुड्सका कामदार रामप्रसाद तिम्सिना तीन महिनादेखि ड्युटीमा फर्कन सकेका छैनन् । काम गर्दै रहँदा भएको दुर्घटनापछि उनी घरैमा आराम गरिरहेका हुन् । उनलाई टाउकोमा लागेको चोट निको हुने क्रममा छ ।
सुनसरीस्थित कारखानाका प्रशासन प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठले भने 'चार सय करीब मजदुरमा दुर्घटना भन्ने कुरा यदाकदा हुने हो । अहिलेसम्म दुइजनालाई यस्तो भयो ।' रामप्रसाद अघि २०६९ बैशाखमा नरबहादुर गुरूङको दाँया हात च्यापिएको थियो । अंगभंग भएपछि उनी अहिले काम गर्ने अवस्थामा छैनन् । 'क्षतिपूर्तिसहित हिसाब देउ भनेको थिएँ । श्रम कार्यालयमार्फत आउ भन्यो', उनले भने, 'अहिले श्रमको निर्णय कारखानाले मान्छौ भनेको छ ।' निको भएपछि उनलाई काम दिइएन । क्षतिपूर्तिसहित हिसाबका लागि उनले पहल गरे । धेरै कुदेपछि उनलाई कारखानाले श्रम कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो देखायो । उनी भन्छन् 'शायद श्रममार्फत छिनोफानो भए लेबरले पछि केही दाबी गर्न मिल्दैन भनेर होला ।'
२०६२ मंसिरमा सुनसरीकै अर्को कारखाना पशुपति कन्टेनरमा मेशिनमा कामदार गणेश कोइरालाको देब्रे हात पर्‍यो । बुढी औंलाबाहेकका चारै औंला हातबाट छुट्टीए । काखानाले तत्काल धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्‍याएर उपचार चलायो । लामो उपचारपछि पुनः काममा फर्किएका उनी गत फागुनमा निकै विरामी परे । त्यसपछि कारखानालाई गुरूङकै जसरी आफ्नो हरहिसाब माग गरे । दुइ दर्जन कामदार रहेको उक्त कारखानाले पनि उनलाई श्रम कार्यालयकै बाटो देखायो । 'श्रमले कारखानालाई सोधेपछि ऐनअनुसार हिसाब दिन्छौ भन्ने जवाफ आएछ', विराटनगरस्थित श्रम कार्यालय आएका उनले भने, 'अब हिसाब पाइन्छ होला ।'
उद्योग संगठन मोरङका अनुसार सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा चालु अवस्थामा ५ सय ३० कारखाना छन् । संगठनका कार्यकारी सचिव सोमनाथ अधिकारीले भने 'एक हजारजनाभन्दा बढि मजदुर भएका कारखाना औंलामा गन्न सकिन्छ । एकदर्जनभन्दा बढि छैनन् ।' कारखानामा मजदुरको स्वास्थ्य सुविधा र दुर्घटनाका सवालमा सञ्चालकहरू सचेत रहेको दाबी गरे । 'सबैले केही भए झट्ट औषधि चलाउन प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गरेका छन् । एम्बुलेन्समा राखेर पठाउन पनि अस्पताल टाढा छैन', उनले भने, 'बरु धेरै कारखानामा मजदुर आफै सफाइ र सावधानी चनाखो नभएको भेटिन्छ ।'
उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा कारखानाभित्र सुरक्षा प्रबन्धको अनुगमन बेलाबखत हुने गरेको बताएका उनले भने 'मास्क कता झुण्ड्याएर धुलोले पुरिएको भेटिन्छ । सोध्यो भने सासै थुनेजस्तो हुन्छ अनि नलगाएको भनेर मजदुरले जवाफ दिन्छन्', उनले भने, 'शौचालयको प्रबन्ध राम्रो भएका ठाउँमा जथाभावी फोहर गर्ने, जाम बनाइदिने र तोडफोड गरेको देखेर उद्योग व्यवस्थापन हैरान भएको भेटिएको छ ।' तर, मजदुरको भनाइमा कारखाना व्यवस्थापनले नै नियमित सफाइको ध्यान दिने गरेका छैनन् ।
श्रम ऐनले दुर्घटनाका सम्बन्धमा क्षतिपूर्तिका लागि राखेका प्रावधान कारखानाले उलङ्घन नगर्ने दावी गोल्छा समूहद्वारा सञ्चालित रघुपति जुट मिलका प्रशासन प्रमुख डा. मोहनचन्द्र घिमिरेको छ । 'पहिले कारखानाभित्रै सहमति गर्ने । भएन भने श्रम कार्यालयको पहलमा ऐनबमोजिमको सुविधा र क्षतिपूर्ति दिने काम सबैले गरेका छन् । एकाध केस अपवाद हुन सक्ला', उनले भने, 'जसकोमा तीन सयभन्दा बढि मजदुर छन्, तिनले सुरक्षित काम लिन उपाय अपनाएकै हुन्छन् ।'
श्रम कार्यालयका कारखाना निरीक्षक मणिनाथ गोपका अनुसार व्यवस्थापनले भनेको मानिदिएन भनेर निवेदन निकै कम मात्र आउँछ । 'हामीलाई महिनाको मुश्किलले एउटा वा दुइटामात्रै त्यस्ता निवेदन प्राप्त हुन्छन्', उनले भने 'मजदुरले पाउनुपर्ने सुविधा र क्षतिपूर्तिको पहलका लागि ट्रेड युनियनको सक्रियता अलि बढि नै हुन्छ । यसकारण सञ्चालकले ऐनले तोकेको दिन्न भन्न पाउँदैनन् ।'
श्रम ऐनको दफा २७ मा कार्यस्थलमा नियमित सरसरफाइ र सुरक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्ने र दुर्घटनाबाट जोगाउन अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायका बारेमा प्रावधानहरू छन् । यसले कारखाना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुरक्षित काम गराएर उत्पादन दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरि श्रम ऐनको दफा ३८ र नियमावली १५, १६ र १७ ले चोट लागे उपचार र अंगभंग वा मृत्यु भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कारखाना सञ्चालकका लागि पालन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई उद्योग वाणिज्य महासंघले रोजगारदाता पुस्तिका नै बनाएर वितरण पनि गरेको छ ।
७० वर्षघि विराटनगरमा कारखानाहरू खुल्ने क्रम सुरुहुँदा मजदुर आवास क्षेत्र बनाइएका थिए । त्यसबेला औलोको प्रकोप थियो । कारखानामा खानबस्न सुविधा पाएका कामदारका लागि विराटनगर जुट मिल, रघुपति, मोरङ सुगर मिल्सलगायतले भित्रै चिकित्सिकसहितको औषधोपचार सेवा दिने गरेका थिए । चार दशकअघिसम्म पनि मजदुरका परिवारले समेत पाउने औषधोपचारको सुविधा अहिले कारखानाहरूमा छैन । 'अहिले कामदारले मात्रै स्वास्थ्योपचारको सुविधा पाउँछन् । त्यो पनि ड्युटीका बेला उसलाई केही भएको हो भनेमात्रै', उद्योग वाणिज्य महासंघको श्रम ऐन परिमार्जन मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका डा. घिमिरेले भने, 'समयअनुसार सबैथोक फेरिएको छ । सुविधाका सवालमा उद्योगीको मनमानी छैन । ट्रेड युनियनहरूले नै जे चाहिने हो त्यो प्रावधान परिमार्जन गरेका छन् ।'
विस १९९३ मा खुलेको मुलुकको जेठो कारखाना विराटनगर जुट मिल लामो समय बन्द भयो । मजदुरले हिसाब पाए । बहालवाला खोजेर सरकारले गत वर्षेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याउन चासो दिएको परिणाम हाल पुनः चल्न थालेको छ । तर, यहाँ अब पहिलेको जस्तो संख्यामा कामदार छैनन् । पुरानो समय जसरी भित्रै सानो अस्पताल राखेर उपचारको सुविधा पनि छैन । चोटपटक लागे भित्रै सामान्य उपचारपछि मजदुरलाई अस्पताल लैजाने गरिएको छ ।
एमाओवादी सम्बद्ध मजदुर नेता तेजलाल कर्ण भन्छन् 'जसरी सबैलाई रोग लाग्छ । दुर्घटना हुन्छ । मजदुर त्योभन्दा फरक छैनन् ।' कारखाना सञ्चालक र मजदुरबीच स्वास्थ्योपचार र क्षतिपूर्तिका सवालमा हुने विवाद कमैमात्र ट्रेड युनियनले समाधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनले भने 'दुबैबीच ऐनअनुसार लिने-दिने कुरा मिलेपछि विवाद गरिरहनु पर्दैन ।'
मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षाका सवालमा धेरै लापरवाही रहेको दावी ट्रेड युनियन कांग्रेसका मोरङ अध्यक्ष गोपाल शर्माको छ । 'धेरै कारखानामा सुरक्षाका कुरामा लापरवाही छ । मजदुर आफै सावधान भएर काम गरेनन् भने अंगभंग नै हुने दुर्घटना हुन्छ', उनले भने, 'त्यस्ता कारखानामा मजदुरले युनियन गठन गर्नै सकेका छैनन् ।' इलेक्ट्रिक वायर, फलामे छड, जुट र साबुनका कारखाना बढि जोखिमपूर्ण रहेको उनले बताए । 'ट्रेड युनियनले कारखाना मालिकलाई एउटामात्रै सुविधाका लागि दबाब दिइरहन सक्दैन । कतिपयमा घटना भित्रभित्रै दबाइन्छ', उनले भने, 'सुरक्षाका सवालमा कारखानाको भित्रको हालत खतरा छ ।' सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा करीव ५० हजार मजदुर कार्यरत छन् । युनियन गठन हुन नदिन सञ्चालकहरूले सुविधाका कुरा गर्ने मजदुरलाई कामबाटै हटाउने गरेको आरोप उनले लगाए ।
उनले भने 'ट्रेड युनियनहरू सबैलाई कारखानाभित्रको मजदुरको जोखिम थाहा छ । तर, एकजुट नहुनुको फाइदा उद्योगीले लिएका छन् । जागिर जाने डरले मजदुर पनि नबोली जोखिममा काम गर्छन् ।'
धूलो, ताप, गन्ध, चर्को ध्वनी र असजिलो वातावरणमा काम गरिरहने मजदुरका लागि शरीरमा पर्ने दीर्घकालीन असरका विषयमा भने न ऐनले बोल्छ न व्यवहारले । ऐनले कारखानाको वातावरणका कारण मजदुर रोगी भए क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने भने पनि यसको पुष्टि गर्ने आधार प्रष्ट छैनन् । डा. घिमिरे भन्छन् 'केमा काम गरिरहँदा कति समयपछि के रोग हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । त्यसैले हामी त्यसबारे भन्न सक्दैनौ ।' रघुपति जुटमा ३ हजार ३ सय कामदार छन् । जुटको धूलो उडिरहन्छ । तर, कसैले आफूलाई त्यही धूलोका कारण कुनै रोग लागेको दावी गर्दै निवेदन दिएको रेकर्ड छैन । व्यवसायजन्य सुरक्षाका सवालमा प्रशिक्षण पनि दिने गरेका संगठनका कार्यकारी सचिव अधिकारीले भने 'ऐनले अंगभंग भए के के कसरी कति दिने भन्ने प्रष्ट बोल्छ । तर, यहाँ कस्तो वातावरणमा कति समय काम गर्दा के रोग हुन्छ अनि त्यसको समाधान कसरी दिने भन्ने प्रष्ट छैन ।'त्यसो त श्रम ऐनको दफा २७ ले स्वास्थ्यलाई खतरा पार्न सक्ने कारखानाले आफ्ना कामदारका लागि वर्षो एकपटक स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, निकै कम मात्र कारखानाले यो प्रावधान मानेर मजदुरका लागि परीक्षण शिविर गराउने गरेका छन् । रानीस्थित रघुपति जुट मिलले गत विहीवार र शुक्रवार कामदारका लागि आँखा परीक्षण शिविरको आयोजना गर्‍यो । 'ठूला कारखानालाई मजदुरको अधिकारका विषयलाई लिएर झमेलामा पर्न मन र समय हु“दैन, त्यसैले ऐनले जे बोल्छ त्यो गरेकै हुन्छन्' उद्योग संगठनका सचिव अधिकारीले भने, 'विवाद धेरैजसो आपसी समझदारीमा टुंगो लगाइने भएकाले ठूलो घटना नभएसम्म हामीले साक्षी बस्नु पदैन । त्यसैले बाहिर आउँदैन ।'
(२०७१ असार २८ को कान्तिपुरमा प्रकाशित)
दुइ साताका लागि अमेरिकाबाट घर आएका धरान विजयपुरका सन्तोष पोखरेल साथी यात्रा थुलुङलाई भेट्न तरहरा गएका थिए । त्यो दिन थुलुङ रामधुनीको सालवनी जाने तयारीमा भेटिए । 'उसले जटायु रेस्टुरेन्ट हिडेको भन्यो, म त कुन नयाँ खुलेछ भन्ठानेँ,' उनले सुनाए, 'कस्तो परिकार पाउने हो जाउँ कि भनेको मान्छे होइन गिद्धलाई मासू ख्वाउने ठाउँ पो रहेछ ।'
सात वर्षयता खुल्दै र चल्दै रहेका यस्ता गिद्ध आहार केन्द्रका कुरा नेपाली सञ्चारमाध्यममा पटक-पटक आएका छन् । घुमेका, सुनेका र पढेकाहरू बढेपछि 'जटायु रेस्टुरेन्ट' को नामबाट अब पोखरेलले जसरी अचम्ममा पर्नु पर्दैन । सिनो खाएर वातावरण सफा पार्न सघाउने गिद्धलाई हेर्दा सुन्दर चरा भनिहाल्न मिल्दैन । तर, यी ठूला आकारका चरा दक्षिण एशियाली मुलकमा निरन्तर संकटमा पर्न थालेपछि यसको कारण खोजी भयो ।
ठूलो संख्यामा मरेको पाइन थालेपछि अनुसन्धानकर्ताहरू सक्रिय भए । पहिलो चरणको अनुसन्धान यसको विनाशको कारण वासस्थान संकट र आहाराको कमी हुनुपर्ने कारणलाई आधार मानेर गरियो । त्यो सफल भएन । त्यसपछि मरेका गिद्धलाई प्रयोगशालामा लगेर अध्ययन गर्दा त्यसका शरीरमा अत्यधिक मात्रामा युरिक एसिड भेटियो । मृगौला ड्यामेज भएको देखियो । यसको कारण खोजियो । निष्कर्ष आयो - मारिनुको कारण डाइक्लोफेनेक ।
यो ट्याब्लेट र खोपमा आउने दर्द निवारक औषधि हो । प्रयोगमा मात्रा धेरथोर हुने भएपनि स्वास्थ्यकर्मीले यो मान्छे र पशु दुवैका लागि उपयोगी मान्छन् । अझ अधिकतर पशुको दर्द निवारक खोप यही थियो । वातावरणवादीले पत्तो पाए - यो ओखती चलाइए पछि मरेका पशुको सिनो खाएपछि गिद्धको पाचन प्रणाली बिग्रन्छ । उक्त औषधी चलाइएका पशु मरे, तिनको सिनो खाएपछि गिद्धका भित्री अंगहरू बिस्तारै सुनिन्छन् र, भिसरल गाउनको समस्या भई मृगौलाले काम गर्न छाड्छन् । अनि यी प्रकृतिका कुचीकार भटाभट मर्छन् । भएको यही हो । डाइक्लोफेनेक नचलाउँ । बरू यसको ठाउँमा साइड-इफेक्ट नगर्ने मेलोक्सिकेम चलाए हुन्छ । २०६३ मा नेपाल सरकारले कुरो मानिदियो ।
ओखतीका कुरामा परिवर्तनको माग मानिएपनि घटेका गिद्धको संरक्षणका लागि नौलो कार्यक्रमको खोजी वातावरणवादीले गरिरहेका थिए । चराविद डा. हेमसागर बरालले भने, 'त्यही खोजी जटायु रेस्टुरेन्ट हो । गिद्ध जोगाउने योभन्दा कारगर उपाय अरू देखिएन ।' सन् २००७ देखि मुलकका विभिन्न भुभागमा चराविदले सम्भावनाको खोजी गरे । नेपाल पंछी संरक्षण संघका अनुसार मुलुकका २१ जिल्लाका ३९ हजार १ सय २२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई डाइक्लोफेनेकमुक्त मानेर संरक्षणका कार्यक्रम ल्याउने कसरत सुरू भयो । यस्ता ठाउँ खोजियो, जहाँ गिद्ध आहाराको खोजीमा सजिलै आउँछन् ।
नवलपरासीको पिठौलीमा पहिलो यस्तो रेस्टुरेन्ट खोलियो । यसरी खोल्ने क्रम विस्तारै बढ्यो । सामुदायिक वनमा स्थानीय उपभोक्ता समितिको जिम्मा दिएर खोलिएका यस्ता रेस्टुरेन्ट सुनसरीको महेन्द्रनगरस्थित सालवनीसम्म आइपुग्दा मुलुकमा सातवटाको संख्यामा पुगेका छन् । आधा दर्जनलाई आर्थिक-प्राविधिक सहयोग पंछी संरक्षण संघले गरेको छ भने सुनसरीमा हिमाली प्रकृतिले सघाएको छ ।
वन क्षेत्रमा पसेर गिद्धलाई बाधा नपारी उनीहरू आएको र सिनो खाएको हेर्न मिल्ने गरि रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापन गरिएका छन् ।
'एउटा गोठ हुन्छ, जसमा बुढा चौपाया पालिन्छ । ती मर्छन् अनि गिद्ध आउने ठाउँमा राखिन्छ,' हिमाली प्रकृतिका निर्देशक प्रा. करणबहादुर शाहले भने, 'यति मात्रै थाल्दा पनि रिजल्ट राम्रो छ । स्थानीयले व्यवस्थापन जिम्मा लिएका कारण गिद्ध अब लोप नहोलान् भन्ने निष्कर्ष छ । तर, खोजी अझै गर्नुपर्छ ।' उनका अनुसार नेपालमा पाइने गिद्धका प्रजाति, वासस्थान र उनीहरूको संरक्षणमा गर्न सकिने कामका लागि अहिलेको प्रयास थालनी मात्रै हो भन्न सकिन्छ ।
विश्वमा २३ प्रजातिका गिद्ध पाइन्छन् । पंक्षी संरक्षण संघका अनुसार दक्षिण एशियाली मुलुकजस्तै नेपालमा नौ प्रजातिका पाइएको रेकर्ड छ । डंगर, हिमाली, खैरो, सानो खैरो, राजगिद्ध, सुनगिद्ध, गोब्रे, हाडफोर र लामो ठुँडे नेपालमा पाइएका प्रजाति हुन् । संघको सूचीअनुसार नेपालमा हिमाली गिद्धको संख्या १० हजारभन्दा कम, सानो खैरो ५० भन्दा कम र डंगर २ हजारभन्दा कम पाइएका छन् । यसैगरि सेतो गिद्ध १ हजारभन्दा कम, हाडफोर ५ सयभन्दा कम, सुनगिद्ध ५ सय भन्दा कम, राजगिद्ध २ सय ५० भन्दा कम र लामो ठुँडे गिद्धको संख्या यकिन भइसकेको छैन । गिद्धले मान्छेलाई आक्रमण गर्दैन । ज्युँदा पशु सिकार गर्दैन । मरेका वा फालिएका सिनो खाइदिएर वातावरण सफा राख्ने चक्रमा योगदान गर्छ ।
गिद्ध नाशिनुका कारण वास्थान विनाश र आहारामा विषादि मै प्रमुख रहेको डा. बरालको भनाइ छ । 'अग्ला रूखमा गुँड लाउँछ । ती रूख दिनदिनै मासिए,' उनले भने, 'पशुको उपचारमा डाइक्लोफेनेक चल्छ । त्यो चलाएको पशुको सिनो खाए त्यतिकै मरे ।' उनका अनुसार गिद्ध मासिएको नेपालमै मात्र होइन । पाकिस्तान र भारतमा पनि त्यस्तै हो । उनले भने, 'नेपालमा संरक्षणका लागि चलाइएको रेस्टुरेन्टको अवधारणा अब ती देशमा पनि सुरु भएको छ ।' यस्तो नगरी संरक्षणको विकल्प नभएको उनले बताए ।
रूपन्देहीस्थित गैडाताल सामुदायिक वनको जटायु रेस्टुरेन्टका संयोजक बाबुराम मल्लले भने, 'सुरूमा हामीलाई कस्तो अनौठो कार्यक्रम हो जस्तो लागेको थियो । तर, अब अभ्यस्त भइसक्यौं । सिनो लगेर राखिदिने गर्न अप्ठेरो छैन ।' उनका अनुसार यहाँ मुलुकमा रेकर्ड ९ मध्येका ६ प्रजातिका गिद्ध आउँछन् ।
'एक दिन खाए त्यसलाई तीन/चार दिन पुग्दो रहेछ,' उनले भने, 'हामीकहाँ वरपर अहिले आफ्नै कालगतिले बाहेक विषादिले गिद्ध मरेको भेटिँदैन ।' समितिले राखेका गोठमा करीव ४० वटा गाइवस्तु छन् । बुढा जनावर किनेर-खोजेर ल्याइन्छ । त्यसलाई पालिन्छ । कालगतिले मरेपछि त्यसलाई गाडामा राखेर गिद्ध आउने खुला ठाउँमा पुर्‍याइन्छ । उनले भने, 'हाम्रो वरपर त्यसले गुँड लाउने खालका रूख छैनन् । भए त यता गुँड भेटिन्थ्यो ।'
कैलालीको श्रीपुर मजगाउँ-७ खुटियास्थित समयजी सामुदायिक वनले गिद्ध रेस्टुरेन्ट चलाउन समिति बनाएर साढे ३ हेक्टर जमिन छुट्याएको छ । संयोजक मनबहादुर बमको अनुभवमा अब गिद्ध लोप हुँदैन । 'मान्छेले बुझे यो पनि वातावरणलाई चाहिने प्राणी हो भनेर,' उनले भने, 'हामीकहाँ गिद्ध मात्रै होइन त्यसका गुँड हेर्छु भने त्यो पनि देखाउन सक्छौं ।' उनका अनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रमा हाल ८२ वटा गुँड पत्ता लागेका छन् । 'रेस्टुरेन्ट सुरु गर्दा तीन वर्षअघि ३५ वटा गुँड थिए,' उनले भने, '६ प्रजातिका देखिन्छन् । हिमाली र डंगर गिद्ध धेरै छन् ।'
नवलपरासी, कैलालीसँगै कास्कीको घाचोक, दाङका लालमटिया, बिजौरी, रूपन्देहीको गैंडातालपछि सुनसरीको रामधुनीमा यस्ता रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएका छन् । रामधुनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको रेस्टुरेन्ट संयोजक केदार राई भन्छन् 'झट्ट सुन्दा अनौठै हो, मान्छेका समस्या थुप्रा छन् कता यो नराम्रो चरो जोगाउनतिर लाग्नु ! पछिपछि कुरो बुझ्दै आइयो । प्रकृतिले सबैको काम विभाजन गरिदिएको रहेछ ।' उनका अनुसार गिद्धले पाएको भूमिका अरूले गर्दैन ।
रामधुनीमा हालसम्म डंगर प्रजातिका १ सय १० वटा गिद्ध आएको गणना गरिएको छ । १५ वर्ष अघिको गणनामा रामुधनी र कोशीटप्पु क्षेत्रमा गिद्धका ६७ वटा गुँड पाइएका थिए । अहिले त्यो संख्या दुइ दर्जनमा झरेको छ । यो क्षेत्रमा गिद्धका सात प्रजाति पाइएका छन् । 'मरेको चौपाया राखिदिएको २० मिनेटमा सिध्याउँछन्' सञ्चालक सदस्य योगेश खतिवडा भन्छन् 'अलि समस्या चाहि यिनका आहारा कसरी पुर्‍याउने भन्नेमै हुन्छ ।'
उनका अनुसार एउटा गिद्धलाई एकपटकमा ५ किलो मासु चाहिन्छ भन्ने हिसाब गरिन्छ । त्यसलाई आधार मान्दा समितिले स्रोत अभावमा खाँचो पुर्‍याउन सकेको छैन ।
डा. बरालका अनुसार रामायणको कथामा रावणले सीता हरण गर्दा जटायुले जोगाउन खोजेको प्रसङ्ग छ । त्यसलाई आधार मानेर गिद्धलाई जटायु भनिएको र सोहीअनुसार रेस्टुरेन्टको नामाकरण गरिएका हुन् । जाडो छल्न तराई झर्ने हिमाली गिद्धका प्रजाति गर्मि सुरु भएसँगै उकालो लाग्छन् । उनका अनुसार असोजमा गुँड लगाएर मंसिरमा फुल पार्ने यो चरोले फागुन लाग्दा बच्चा कोरल्छन् । समुदायमा आधारीत जटायु रेस्टुरेन्टले गिद्धका गतिविधि हेर्न आउनेबाट प्रवेश शुल्क लिने अभ्यास थालेका छन् । कैलालीका बलले भने 'टिकट काटेर हेर्न पाउनु पनि रमाइलो हो । धेर थेग्दैन तर, प्रवेश शुल्क तिरिदिने बानीले हामीलाई यो कार्यक्रम चलाउन केही केही सहयोग हुन्छ ।'
(२०७० जेठ ३ शनिवार, कान्तिपुर कोसेलीमा प्रकाशित)
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 3:01 PM No comments:
एक घण्टाको यात्रा
दुई पाङ्ग्रेका सीट
रीसै उठेर आउँछ
पोल्न थाल्छन् जब पिँध
टक्क अडिन्छु चिया घुम्तीमा
आराम दिन्छु टायरलाई
पसले कति संयमित
उभिएकै छन् उभिनुपर्ने
बसेकै छन् बस्नुपर्ने
संसार झेलेका छन्
खै कसरी चलेका छन्
चुपचाप छ सडक
छन् हतारको गन्तव्य खोजीमा
उभिएकै छन् उनीहरू
चलेको छ पसल ।।
म देख्छु अलि पर्तिर
हनुमान छन् दुर्गा छिन्
सुँडमा लड्डु च्यापेका लम्बोदर
अनि छन् लठ्ठ परेका महादेव
देख्तिन उनीहरू बोलेको
पस्छन् निस्कन्छन् मान्छेका हुल
सुन्छन् चुपचाप मूर्तिहरू
याचना, धम्की, प्रलोभन र माग
एउटै पोज कति पट्यार लाग्दो
घुम्न निस्कन्छौ ?
तिनका पनि पोल्दो हो पिँध
उड्दो हो मन
उठ्दो हो रीस
कुण्ठा लिएर युगौंदेखि
किन छन् चुपचाप
मन शीतल हुन्छ
अनि भन्छु- उनीहरूभन्दा मलाइ आनन्द छ ।।
विराटनगर, ३२ असार २०७१
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 9:55 PM No comments:
गधा मैमत्ता लाग्छ
थाहा छैन हो लागेको कि भएको
स्वर सुन्यौ ?
हो है !
न सुर नत ताल
श्रम लिन्छौ भने
आखिर तिम्रो पनि
चल्छ होला छातिभित्र मुटु ।।
बेसुर आवाजमा बोल्छन्
दुर्इ खुट्टा अल्झाइएका छन्
देख्छु उ गर्छ माया
लाउँछ आफ्नालाई लात्ती पनि
ऊ रूञ्छ कि हाँस्छ
मनभित्र मर्छ कि बाँच्छ
मजा पनि होला भाषा नबुझनुको
यतै कतै खान्छ मेल मनुवासँग ।।
हाम्रा धोबीका सिर्कना
आगो बाल्ने पेट
इच्छा फलाउने मन
उसले सन्तानलाई स्कुल पठाउनु छैन
अस्पताल र अफिस धाउनु छैन
चिनेको भोकमात्रै हो
तै पनि मालिकप्रदत्त
सिर्कना, पानी र दाना
उसले दिने श्रम
विराटनगर, २० असार २०७०
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 1:13 PM 1 comment: